NepaliFilm – Nepaliko Aawaj
विराटनगर । अहिलेका ब्यस्त नायक तथा मोडल पल शाहविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष अरुण प्रधानले आफूमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट गरेको भन्दै पल शाह विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका हुन् । प्रधानले शाह बिरुद्ध निवेदन दिएपछि शाहलाई शुक्रबार दिउँसो छलफलका लागि बोलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले ...
Breaking News: चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको असामायिक निधन
काठमाण्डौ । चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको असामायिक निधन भएको छ । गए राति ११ बजेर १५ मिनेटमा भट्टराईको ॐ अस्पताल काठमाण्डौमा निधन भएको जनाइएको छ । मृत्युको कारण हर्टअट्याक भएको बताइएको छ । चलचित्र पत्रकार लक्ष्मण सुवेदीलाई हामीले बुझ्दा घटना राती ११ः१५ को भएको जानकारी आफुले पनि पाएको बताए । अर्का चलचित्र पत्रकार रबि लामिछानेले पनि घटना रातीनै भएको र मृत्युको कारण ...
चलचित्र ‘बोबी’ युनिट प्रोमोशनको क्रममा चितवनमा (भिडियो सहित)
दुई दशकअघि कास्कीको हेमजाको एउटा युवक र पोखराकी युवतीबीच चिनजान हुन्छ । चिनजान अन्तत: कसरी प्रेममा बदलिन्छ  ? दुवैका परिवार सम्बन्धका विपक्षमा भएपछि कस्तो किसिमको अन्तर्द्वन्द पैदा हुन्छ ?  अन्तत: दुवैको संघर्षपछि उनीहरूको प्रेम कसरी सम्योगान्तमा परीणत हुन्छ ? बबीको कथा यही पारीधी भित्र जेलिएको छ । यो कथा फिल्मकै हो, तर साँचो ! फिल्ममा खेल्ने मुख्य पात्र पनि वास्तविक नै ...